လူကြီးများအတွက် LEGO ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft အပြည့်အဝပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း
14 / 09 / 2021 01 / 10 / 2021 Dimitri 465 Views စာ2မှတ်ချက် ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft, 10292 အဆိုပါ Friends Apartments, ၂၁၃၂၈ Seinfeld, Creator Expert, Ideas, Lego, Lego Creator Expert, လူကြီးများအတွက် Lego, Lego Ideas, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, မဲ Ashton, Netflix နဲ့, Queer မျက်လုံး, reviews, အဆိုပါ LEGO Group
Netflix show ရဲ့ဆောင်ပုဒ်လိုပဲ၊ လူကြီးများအတွက် Lego ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft စတိုင်၊ အရသာနှင့်လူတန်းစားကိုဖော်ပြသော set တစ်ခုဖြစ်သည်။
အောင်မြင်မှုနှင့်အပြုသဘောဆောင်သောတုန့်ပြန်မှု 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်လမ်းခင်းပေးခဲ့သည် Lego LGBTQIA+ ပရိသတ်အများစုအားဆွဲဆောင်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောအစုံများ၊ ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft ပြကွက်တစ်ခုထက်မပိုသောသိသိသာသာအစုံတစ်ခုကိုပရိတ်သတ်များအားပေးခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုတစ်ဆင့်ပိုယူပါ။
Netflix TV show သည် ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင်ပထမဆုံးထုတ်လွှင့်သော series တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ 'Fab Five' ဟုအမည်ပေးထားသောလိင်တူချစ်သူပညာရှင်များအုပ်စုတစ်စုပါဝင်သောအရာတစ်ခုဖြစ်ပြီးဖက်ရှင်၊ အစားအစာ၊ ကျန်းမာခြင်း၊ ဘယ်သူကကျော်ဖြတ် (သို့မဟုတ်ရှိုးပွဲမှာပိုကောင်းအောင်လုပ်မလဲ) ကိုဖြောင့်စင်းတဲ့လူတစ်ယောက်၊ သူ့ဘ ၀ ရဲ့ကဏ္ aspects အားလုံးကိုအကြံဥာဏ်တွေပေးပြီးသူ့ကိုသူ့ကိုယ်သူအကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပေးလိမ့်မယ်။ ၂၀၁၈ သို့လျင်မြန်စွာနှင့်ပြပွဲကို Fab Five အမှတ်တံဆိပ်အသစ်နှင့် Netflix တွင်ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီးအမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများပိုမိုကောင်းမွန်စေသောကုသမှုကိုရရှိစေသည်။
Queer Eye သည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ဖျော်ဖြေမှုသာမကစိတ်အားတက်ကြွစေသောတီဗီရှိုးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ မတူကွဲပြားမှုများကိုဂုဏ်ပြုခြင်းနှင့်လူများကိုသူတို့ကိုယ်သူတို့အကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်လာစေရန်အားပေးခြင်းသည်မိုင်တစ်သန်းဝေးသောနေရာတွင်မခံစားရသောကျင့်ဝတ်တစ်ခုဖြစ်သည် Lego အဖွဲ့၏ကိုယ်ပိုင်တန်ဖိုးများ။
၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft ပြပွဲနှင့်ပတ်သက်သောအရာမှန်သမျှကိုပုံဖော်သောအစုံတစ်ခုနှင့်တူသည်။ ဒါဟာစတိုင်ကျတယ်၊ နည်းနည်းရီစရာကောင်းတယ်၊ ရယ်စရာရယ်စရာကောင်းလိုက်တာ၊ ဒါပေမယ့်အားလုံးထက်၊ ဒါဟာ start ပီးဆုံးရနျ။
theme: လူကြီးများအတွက် Lego အမည်သတ်မှတ်မည် - ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft ဖြန့်ချိ: အောက်တိုဘာလ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 89.99 / $ 99.99 / € 99.99 အပိုင်းပိုင်း: 974 အသေးစားပုံများ: 7
Lego: အောက်တိုဘာလ 1, 2021
Queer Eye ၏ပြန်လည်စတင်မှုသည်ရာသီ ၅ ခုနှင့်ပြီးခဲ့ပြီး၊ ဆဋ္ဌမမြောက်ဖြစ်သည်။ apartments များသည် series တစ်ခုစီတွင်ပြောင်းလဲသွားသော်လည်းဤပုံစံသည်ပထမရာသီ၌ပါ ၀ င်သောအရာပေါ်တွင်အခြေခံသည်။
အဆိုပါ start တည်ဆောက်မှု၏အသံသည်တောက်ပလာလိမ့်မည်၊ sm ကိုအသုံးပြုသော sub-assembly များစွာနှင့်အတူart နည်းစနစ်များနှင့်မယုံနိုင်လောက်အောင်ပါးနပ်စွာပြသ parts အသုံးပြုမှု စုစုအများစုအတွက်နောက်ဆုံးတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်စတိုင်ကျသော ap ကိုပတ် ၀ န်းကျင်ဖြန့်မည့်ခေတ်မီပရိဘောဂပစ္စည်းများတည်ဆောက်လိမ့်မည်artment ။
ပထမအဆင့်အနည်းငယ်အတွင်း၌အဖြူရောင်2×4ယာဉ်ရွှံ့ကာကို သုံး၍ ခေတ်ပြိုင်အလှပြင်ဆိုင်ကုလားထိုင်ကိုသင်တည်ဆောက်လိမ့်မည်။ အလွန်ခေတ်စားပြီးဒီဇိုင်းပြောင်ပြောင်ဒီဇိုင်းဆွဲ torsos အမျိုးမျိုးနှင့်ပြည့်စုံသောအဝတ်စထရိ (ဤနောက်ပိုင်းတွင်ပိုများသည်); Fab Five ၏ဧရာမတီဗီဖန်သားပြင်၊ ပြပွဲ၏အရေးကြီးသောပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။ Fab Five ၏ဆိုဖာကြီး
အများကြီးမကြာသေးမီနဲ့တူ ၂၁၃၂၈ Seinfeld နှင့် 10292 အဆိုပါ Friends Apartmentsဆိုဖာကိုအဓိကတည်ဆောက်မှုအတွင်းမှအပြင်သို့ရုတ်သိမ်းနိုင်သောသီးခြားတပ်ဆင်မှုတစ်ခုအနေနှင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ ၎င်းသည်ဤ ap ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်artment စတိုင်အစုံ၊ ၎င်းသည် ap ကိုပြသရန်တောက်ပသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်art နေရာအကန့်အသတ်ရှိသည့်အခါမော်ဒယ်၏ L ပုံသဏ္ဌာန်ဆိုဖာအပြင်ဤနေရာတွင်ကော်ဖီစားပွဲ၊ စားပွဲခုံမီး၊ ဘေးစားပွဲနှင့်သားရေထိုင်ခုံတို့ပါ ၀ င်သည်။ အသုံးပြုသောနည်းစနစ်များသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး၊ နီးပါးရှိသည် Ideas သူတို့အတွက်အရည်အသွေး (တစ်ခါတစ်ရံမှာချို့တဲ့တဲ့အရာတစ်ခုပါ 10292 အဆိုပါ Friends Apartmentsနှင့်အချို့သောဒီဂရီရန် ၂၁၃၂၈ Seinfeld၊ )
ကြယ်သီးထိပ်များကိုရုပ်မြင်သံကြားဖန်သားပြင်ကိုလုံခြုံစေရန်တံတားများဖြင့် ၁ × ၁ ပတ်လည်ကြွေပြားများနှင့်ကပ်ထားသည်။ မီးခိုးရောင်အသေးအဖွဲပုံသဏ္န်ဟန်ပြခုံကိုစားပွဲခုံ၏အောက်ခြေအဖြစ်သုံးသည်။ သစ်သားကုလားထိုင်ပေါ်တွင်လိပ်များကိုပြန်လည်ဖန်တီးရန်သစ်သားပုံစံများပါသောအနက်ရောင် ၁ × ၂ အုတ်များကို၎င်းတို့ဘက်လှန်ထားသည်။ ၎င်းသည်အရာအားလုံးကိုတကယ်ဖန်တီးမှုနှင့်ပျော်စရာကောင်းသော st များအတွက်ပြုလုပ်သည်art တည်ဆောက်မှုတစ်လျှောက်လုံးတွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေသော set သို့ ap ပတ်ပတ်လည်၌ပျံ့နှံ့နေသောအပင်များပင်artment ကိုပြောင်မြောက်စွာလုပ်ဆောင်သည်။ ပန်းအိုးများစွာကို ၁ × ၁ ကြွေပြားများဖြင့်မှောက်ထားသော ၁ × ၁ ပတ်လည်ကြွေပြားများပေါ်တွင်ပန်းများနှင့်တွဲထားပြီး ၄ × ၄ ကွန်ကရစ်ကိုပိုကြီးသောအိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးထားသည်။
ap ၏ဧရိယာတစ်ခုစီartment သည် Fab Five ၏တစ် ဦး ချင်းကျွမ်းကျင်မှုအစုံများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသောနေရာအချို့သည်အမှန်တကယ်မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ ap တွင်မပါ ၀ င်ပါartment၊ သူတို့ကပြပွဲမှာပါ ၀ င်နေတုန်းမို့ဆက်စပ်မှုနဲ့သင့်တော်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ ပရိတ်သတ်အကြိုက်ဆုံးနဲ့အလှပြင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ Jonathan ရဲ့အလှအပ၊ အစားအစာပညာရှင် Antoni အတွက်အပြည့်အ ၀ သိုလှောင်ထားတဲ့မီးဖိုချောင်၊ fashionista Tan နဲ့ဖက်ရှင်စတိုင်လ်အတွက် ideas ဒီဇိုင်းဂုရု Bobby အတွက်ဘုတ်အဖွဲ့၊ ဘဝနည်းပြ Karamo သည်သူ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသော laptop နှင့် polaroids များပါ ၀ င်သည်။
ဤနေရာများတစ်ခုစီသည်စတိုင်လ်နှင့်အတန်းအစားကိုအဆန်းပြားဆုံးနှင့်ရင့်ကျက်သောအတွင်းခန်းများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ဖန်တီးသည် Lego အဖွဲ့ကထုတ်လုပ်ဖူးတယ်။ နောက်ဘက်နံရံတွင်အဖြူရောင်မက်ထရိုကြွေပြားများ (မင်္ဂလာပါ၊ အဖြူရောင် 1 ×2ပန်းရန်အုတ်များ)၊ မီးဖိုချောင်ကျွန်း (၂ × ၄ မီးကင်အပေါ်ကြွေပြားများပါ ၀ င်သော)၊ butler နစ်မြုပ်မှု၊ ဗီဒိုများနှင့်အပြင်အဆင်အားလုံးသည်အလွန်ကြည့်ကောင်းသည့်အပြင်ပြပွဲ၏ screen ap တွင်အလွန်စစ်မှန်သည်။artment ။ ပုံနှိပ် parts နှင့်စတစ်ကာများသည်အလွန်ခေတ်မီပြီးခေတ်ပြိုင်ခံစားမှုကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်ရှည်လျားသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထင်ကရ 'စတိုင်၊ အရသာ၊ အတန်းအစား' အမှတ်အသားနှင့် Fab Five လိုဂိုနှစ်ခုလုံးသည်ခေတ်မီဆန်းသစ်သောကူရှင်များ၊ ပိုစတာများနှင့်အလှဆင်မှုများနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။
အသွင်ပြောင်းပတ် ၀ န်းကျင်ကိုအခြေပြုထားသောရုပ်သံစီးရီးသည်အံ့မခန်းပြုပြင်မွမ်းမံမှုမပါဘဲပြီးပြည့်စုံလိမ့်မည်မဟုတ်၊ ဤအစုသည်ကွဲပြားခြားနားသည်။ Jonathan ၏အလှပြင်ဆိုင်နောက်ဘက်တွင်ပြီးပြည့်စုံသောအသွင်အပြင်ကိုရှာဖွေရန်အမျိုးမျိုးသော ၀ တ်စုံများ၊ ဆံပင်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်ပြည့်စုံသောပြုပြင်ရေးစခန်းတစ်ခုရှိသည်။ လူကြီးများအတွက် Lego set တွေကသူတို့ရဲ့ play features တွေအတွက်အမြဲလူသိမများပေမဲ့ ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောတစ်ခုရှိသည်။ (splat gear များ သုံး၍) မီနှင့်အနောက်သို့အသွင်ပြောင်းအခန်း (minifigure makeovers) ကိုသင်၏မျက်စိရှေ့တွင်ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကျန်တဲ့အပိုင်းတွေလိုပဲအတူတူပေါင်းစည်းရတာတကယ့်ကိုပျော်ရွှင်စရာဖြစ်ပြီးလည်ပတ်ရတာလဲပျော်စရာကောင်းပါတယ်။ (မင်း Anakin Skywalker နဲ့ D ကိုနေရာပေးဖို့စီစဉ်နေပြီဆိုရင်လက်မြှောက်ပါarth Vader သည်အဝေးမှနဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုမှအဆုံးစွန်ဆုံးသောအလှည့်အပြောင်းအတွက်ဆုံလည်ခန်းထဲသို့)
တည်ဆောက်ပုံသည်ကောင်းသလောက်၎င်းသည်ဤအစုကိုမယုံနိုင်စရာနှစ်လိုဖွယ်အရာတစ်ခုအဖြစ်သို့မြှင့်တင်သောဆက်စပ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည်။ ထူးခြားသော torsos ၁၀ ခု၊ ခြေထောက်ကိုးချောင်း၊ ဆံပင်ရှစ်ချောင်း၊ ဦး ထုပ်များ၊ အသုံးအဆောင်များ၊ ခရမ်းရောင်လက်ကိုင်အိတ်များ၊ လက်တော့ပ်များ၊ ဖုန်းများ၊ စာအုပ်များ၊ အိုးများ၊ ပန်းအိုးများနှင့်အခြားအရာများသည် ap ၏ကဏ္ every အသီးသီး၌ပျံ့နှံ့သွားသည်။artment ။ ၎င်းသည် minifigures ခုနှစ်ခု၌အမျိုးမျိုးသောအသွင်အပြင်များနှင့်စတိုင်များကိုရောနှောပေါင်းစပ်နိုင်သည့်တကယ့်ကုသနည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းကိုစုဆောင်းရန်ထည့်ရန်များစွာသောစိတ်ကြိုက် minifigures များဖန်တီးရန်ရွေးချယ်မှုအသစ်များကိုစိတ် ၀ င်စားသူများအားပေးသည်။
၉၇၄ ခုသာပါ ၀ င်သောတည်ဆောက်မှုသည်လက်ရှိစျေးကွက်တွင်ရှိသည့်အလားတူအစုံများစွာထက်ပိုမြန်သည်။ ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft အဲဒါကိုပြင်ဆင်တာထက်ပိုစုစည်းမိလာတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဟာအရေအတွက်ထက်အရည်အသွေးအမြဲဖြစ်သင့်တယ်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း Fab Five (သရုပ်ဆောင်များ၏စုပေါင်းအမည်ပြောင်) ကို minifigure ပုံစံဖြင့်ကိုယ်စားပြုသော်လည်း၎င်းတို့သုံး ဦး သည် ၀ တ်စုံမျိုးစုံ ၀ တ်ရန် ၀ တ်စုံများပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ပြသခြင်းသို့ရောက်လာသောအခါများစွာသောစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်စရာများကိုထည့်သွင်းပေးသောအံ့သြဖွယ်နှင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောထိတွေ့မှုတစ်ခုဖြစ်သည် ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft။ The Lego ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည် Fab Five ၏အသွင်အပြင်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်များကို minifigure ပုံစံဖြင့်ပြန်လည်ဖန်တီးရာတွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အားလုံးကိုချက်ချင်းမှတ်မိနိုင်ပြီး၎င်းတို့တွင်အားနည်းချက်သေးသေးလေးတစ်ခုမှမရှိပေ။
သူ၏အဖြူရောင်တီရှပ်ပေါ်တွင် Antoni Porowski ၏ပုံနှိပ်ထားသောလည်ပင်းသည်ရိုးစင်းသောဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူ၏အခြားရွေးချယ်စရာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တွင်ပုံနှိပ်ထားသောကမ္ဘာကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ပါ။ Jonathan Van Ness နှင့် Karamo Brown တို့တွင်လည်းရွေးချယ်နိုင်သော torsos များရှိသည် - Karamo ၏ပုံစံအတိုင်းအင်္ကျီသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော်လည်း Jonathan ၏ 'Love is Love' jumper သည်အတိအကျမီးမောင်းထိုးပြပြီးအစုံ၌အကောင်းဆုံးကိုယ်ထည်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
Matthew Ashton သည်ဆံပင်ပုံစံအသစ်၌ပါဝင်သောဆံပင်ပုံစံအသစ်ကိုပြောကြားခဲ့သည် 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ အခြားအစုတစ်ခုတွင်လည်းသုံးလိမ့်မည်၊ ၎င်းသည်တန်ပြင်သစ်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆံပင်ပုံစံကိုပြန်လည်ဖန်တီးရန်သုံးသောထင်ရှားသောငွေရောင်ဖြစ်သည်။ သူ၏မျက်နှာပေါ်တွင်ရိုက်နှိပ်ထားသောငွေရောင်အစက်အပြောက်များသည်အခြားတောက်ပသောထိတွေ့မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ Bobby Berk ၏ minifigure သည်ငါးခုတွင်အရှင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်းသူ၏ပုံစံဆွဲထားသောကိုယ်ထည်သည်အလွန်ထူးခြားနေသေးသည်။
ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲများပေါ်တွင်အခြေပြုထားသောဇာတ်လမ်းတွဲအများစုသည်စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်များပေါ်တွင်ဗဟိုပြုသည်၊ Queer Eye ၏ကူညီပံ့ပိုးသူများ (သို့) သူရဲကောင်းများသည်ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်လျှောက်လုံးတွင်လူသိများသည် - ၎င်းသည်ပြပွဲ၏ဖြစ်တည်မှုကိုအဓိက ဦး တည်သူအားလုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Season4၌ပြပွဲ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်အပြင်းပြဆုံးအရာများထဲမှတစ်ခုအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သော Kathi Dolley ၏ပုံစံ၌သူရဲကောင်းများကိုပါ ၀ င်ရန်သင့်တော်သည်ဟုသာခံစားသည်။
Kathi သည်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ပြောင်ထိုးထားသောဆံပင်ပုံစံနှင့်ပြည့်စုံသောသူမ၏အသွင်အပြင်နှစ်ခုလုံးကိုပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည် set အတွင်းမှအခြားအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောထိတွေ့မှုတစ်ခုဖြစ်သည်၊ Kathi သည်အသေကောင်အဖြစ်အသေခံရန်အတော်လေးဂုဏ်ယူစရာဖြစ်ရမည်။ Lego minifigure ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Fab Five ရဲ့နှောင်းစွယ်အဖော် Bruley (Series3၏တစ်လျှောက်လုံးတွင်ပါ ၀ င်သောပြင်သစ်ခွေးဘီလူး) အတွက်ထိုက်တန်သောလက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ French bulldog တိရိစ္ဆာန်အပိုင်းအစလည်းပါ ၀ င်သည်။
အဆိုပါ Lego Group သည်ယခုအချိန်တွင်ဝေဖန်သုံးသပ်သူများအတွက်လွယ်ကူအောင်မလုပ်နိုင်ပါ၊ ၎င်း၏အစုံများစွာအတွက်စျေးနှုန်းအချက်အလက်များကိုတရားဝင်ထုတ်ဖော်မပြသပါ၊ ၎င်းသည်ကိစ္စဖြစ်သည်။ ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft.
ဒါပေမယ့်ကောလာဟလတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဗြိတိန်မှာပေါင် ၈၀ ကနေ ၉၀ ကြား၊ US မှာ ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာနဲ့ဥရောပမှာ ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာလောက်ကျသွားလိမ့်မယ်။ ၎င်းထက်ပိုနည်းသောအပိုင်းများပါ ၀ င်သည် 10292 အဆိုပါ Friends Apartments or ၂၁၃၂၈ Seinfeldဒါပေမယ့်ပုံနှိပ် p တွေပေါများတယ်arts, minifigure parts နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်နောက်ဆုံးပေါ်စျေးထက်အနည်းငယ်ပိုမြင့်သည်ကိုအကြောင်းပြသင့်သည် Ideas အစုံ
အပ်ဒိတ်: စျေးနှုန်းကိုယခုယူရို ၈၉.၉၉ / ၉၉.၉၉ / ၉၉.၉၉ အဖြစ်အတည်ပြုလိုက်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်ချက်များအားလုံးသည်ဆက်လက်ရပ်တည်နေသည်ကိုဆိုလိုသည်။ ၎င်းသည်ဘေးနားရှိစျေး ၀ င်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည် ၂၁၃၂၈ Seinfeldသို့သော်၎င်း၏ပုံနှိပ်မှုများနှင့် minifigure p မှတဆင့်တရားမျှတသည်arts နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ရိုးသားကြပါစို့။ ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft လူအများကြီးအပေါ်မမြင့်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်ပါတယ် Lego ဆန္ဒစာရင်းများ၊ မည်သူ့ကိုမျှမျှော်လင့်မထားသို့မဟုတ်တောင်းခံရန်အစုံပင်မဟုတ်ပါ Lego သို့သော်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့၏ဒုတိယဥက္ကဌ Matthew Ashton) မည်သို့ပင်ဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့တင်ပြခဲ့သည့်အရာသည်အတူတကွပေါင်းစည်းခြင်းအတွက်ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုသာမဟုတ်ဘဲစတိုင်အကျဆုံး ap တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်artment ပုံစံကိုလက်ရှိမှာရနိုင်ပါတယ် Lego ကက်တလောက်။
၎င်းသည်ကြည့်ကောင်းရုံတင်မကဘဲဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ပုံစံငယ်များ၊ ဆံပင်များနှင့်ပရိဘောဂများပါ ၀ င်သည်။ Lego ကမ်းလှမ်းမှုအားလုံးနှင့်အတူလယ်ကွင်းနေ့ရှိလိမ့်မည်။ torsos ပေါ်ရှိ 'Love is Love' နှင့် 'Rebuild the World' ပုံနှိပ်များသည်စုဆောင်းသူများအတွက်အထူးနှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသည်မှာသေချာသည်။
ဒီအစုံနဲ့ 40516 လူတိုင်းက Awesome ပါ, အ Lego LGBTQIA+ ပရိသတ်တစ် ဦး အတွက်အစုရှယ်ယာများပေးအပ်ခြင်းသည် Group အားချီးကျူးသင့်ပြီး၎င်းသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ်မည်မျှတိုးတက်ပြီးရှေ့သို့တွေးခေါ်ပုံကိုပြသသည်။ ဒီ set ကိုပိုရင့်ကျက်တဲ့ fan base အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပေမဲ့အဲဒါကပါဝင်မှု၊ လက်ခံမှုနဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေအကြောင်းအဟောင်းတွေနဲ့အငယ်ပရိသတ်တွေကြားမှာစကားပြောဆိုမှုတွေကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး။
သို့သော်ထို့ထက်ပိုသောအချက်မှာချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ အသေးစိတ်အာရုံစိုက်မှုနှင့်စစ်မှန်မှုတို့ဖြစ်သည်city ဒီ set ထဲကို ၀ င်သွားပြီဆိုရင်ဒါကတကယ့်ကိုအံ့သြစရာအထုပ်တစ်ခုဖြစ်စေတယ်၊ ​​ပြီးတော့မင်းကရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲတွေရဲ့ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်မဟုတ်ရင်တောင်မှဒီစိတ်ကူးကိုဖန်တီးဖို့ဒီနေရာမှာလုံလောက်ပါတယ်။ Lego ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်
အရာအားလုံးအကြောင်း ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft ၎င်းသည်တီဗီရှိုး၏စိတ်ဝိညာဉ်နှင့်ဖမ်းစားထားသကဲ့သို့ခံစားရသည် Lego သူ့ဟာသူ၊ အဲဒါကပျော်စရာကောင်းပြီးနည်းနည်းတော့ရီစရာကောင်းပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာမင်းမျက်နှာပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အပြုံးလေးနဲ့မင်းကိုထားခဲ့လိမ့်မယ်။
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့မိတ္တူအမိန့်အားဖြင့်ပါဘူး ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစုံတယောက်သောသူသည်သုံးနိုင်သည် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
လူကြီးများအတွက် ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft အတွက် LEGO တည်ဆောက်ရန်အချိန်မည်မျှကြာသနည်း။
၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft အကြီးဆုံးအတွဲများမဟုတ်သော်လည်းအတော်လေးလျင်မြန်စွာစုစည်းလာသည်။ အိတ် ၁၀ လုံး၊ နံပါတ်တစ်မှ ၅ အထိနံပါတ်များရှိသည်၊ ၎င်းတို့ကို ဖြတ်၍ သင်၏လမ်းကိုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်သုံးနာရီခန့်ကြာလိမ့်မည်။
လူကြီးများအတွက် ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft အတွက် LEGO တွင်အပိုင်းဘယ်နှစ်ခုရှိသနည်း။
အတွင်း၌ ၉၇၄ ခုသာရှိသည် ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loftဒါပေမယ့်အစုံမပါတဲ့အရာကအဲဒါကို minifigure p အမြောက်အမြားအတွက်ထည့်ထားတာထက်ပိုပါတယ်arts နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
လူကြီးများအတွက် LEGO သည် ၁၀၂၉၁ ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft မည်မျှကြီးသနည်း။
၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft အမြင့် ၉ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၃၅ စင်တီမီတာနှင့် ၂၁ စင်တီမီတာနက်ရှိုင်းသည်၊ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်အရွယ်အစားတူသည် ၂၁၃၂၈ Seinfeld.
လူကြီးများအတွက် LEGO ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft သည်မည်မျှကုန်ကျသနည်း။
၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft ယူကေတွင်ယူရို ၈၉.၉၉၊ အမေရိကန်၌ ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာနှင့်ဥရောပ၌ ၉၉.၉၉ ဒေါ်လာဖြင့်လက်လီလက်ကားရောင်းချနိုင်လိမ့်မည်။ LEGO.com နှင့် Lego အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှစတိုးဆိုင်များ
← Lego Star Wars နှင့် Marvel ၂၀၂၂ အတွက် minifigure အထုပ်များ
LEGO သည်နောက်ဆုံးတွင်၎င်း၏ ၁၈+ ထုပ်ပိုးမှုသည်ခြွင်းချက်များကိုဖွင့်ထားသည်ဟုသက်သေပြသည်။ →
အပေါ်အတွေး ၁၂၂ ခုလူကြီးများအတွက် LEGO ၁၀၂၉၁ Queer Eye - The Fab 10291 Loft ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း"
မီးဖိုချောင်သုံး၊ မီးဖိုချောင်သုံးအပင်များနှင့်မီးတောက်နောက်မှတောက်ပစွာကြည့်ကောင်းမည့်နီယွန်နိမိတ်ကိုငါကြိုက်သည်။ ၃၆၀ ဒီဂရီ display နှင့်နံရံလေးခုမရှိသော“ film set” ပုံစံဒီဇိုင်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အမာခံပရိသတ်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် MOC ထဲသို့အစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုလုပ်ဆောင်ရန်ဤအရာကိုငါ ၀ ယ်ရန်အလားအလာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်
14/09/2021 at 13:35
ငါကလိင်တူချစ်သူတစ်ယောက်၊ Lego ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအသစ်ကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ် Star Wars အစုံ။ လိင်တူချစ်သူပရိသတ်ကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့အတွဲတွေကိုငါစိတ်မ ၀ င်စားဘူး။ လိင်တူချစ်သူတွေကိုစိတ်ဝင်စားစေတဲ့အရာကလိင်တူချစ်သူတွေအကြောင်းဖြစ်ရမယ်လို့ထင်တာမှားတယ်။